China Spring Tine Ripper For Ugandaganda 3 Point Ripper Ipulazi Umlimi ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
I-Spring Tine Ripper YeTractor 3 Point Ripper Farm Farmivator
Umsebenzi wokuhlakulela: ngesikhathi sokukhula kwezitshalo esiteji sezithombo, ukhula, ukukhuliswa kwenhlabathi noma ukulinywa kwenhlabathi kuvame ukwenziwa phakathi kwemigqa yezithombo. Inhloso yokulima ukuqeda ukhula, ukonga amanzi, ukuhlakulela inhlabathi ukuze kulondolozwe ukushisa, ukukhuthaza ukubola kwezinto eziphilayo, nokwakha izimo ezinhle zokukhula nokuthuthuka kwezitshalo.
Ukuhlakulela imishini uhlobo lwemishini yokulima inhlabathi esetshenziselwa ukukhulula inhlabathi, ukhula nokutshala inhlabathi ngenkathi yokukhula kwezitshalo.
Ukusebenza ububanzi (mm)
Ukusebenza ukujula (mm)
No. ka tines (pc)
Amandla afanayo (hp)
Izidingo Zobuchwepheshe Kwezolimo Zokulima
1. Ukuxegiswa kwenhlabathi kuhle, kepha ukufuduswa kwenhlabathi kuncane;
2. Inezinga eliphezulu lokususa ukhula futhi ayilimazi izitshalo;
3. Akukho bumba, ukugoqwa kotshani nokuvaleka ezingxenyeni zokulima;
4. Ukujula kokulima kufanele kuhlangabezane nezidingo futhi isimo sokwehluleka ukulima akufanele senzeke;
5. Ukuhlukaniswa kwezitshalo kufanele kube okufanayo kanti nezitshalo ezingomakhelwane akumele zikhululwe.
Ukulungiswa kwemishini nokususa ukhula kungenza inhlabathi ivuleke futhi iphefumuleke, kuthuthukise ukungena komoya kwenhlabathi, kususe ukhula, futhi kudale nezimo ezinhle zokukhula kwezitshalo. Uma kuqhathaniswa nokulinywa kwabantu nezilwane, ukutshalwa ngemishini kunekhwalithi ephezulu, kungathuthukisa amandla omhlaba wokulondolozwa komanyolo kanye nomanyolo, kuthuthukise ukumelana nokufakwa kwezitshalo, ukusebenza kahle kakhulu, izindleko zokukhiqiza eziphansi kanye nesivuno esikhulu sesivuno.
Umlimi wamazinyo wasentwasahlobo wakhelwe ngokuya ngezidingo zobuchwepheshe zezitshalo ezomile. Kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuzinza kokujula kokulima, izinga lokususa ukhula eliphezulu kanye nezinga lokulimala kwezithombo eliphansi. Lo mklamo usetshenziswa ngogandaganda. Ngesikhathi sokuhlinzwa, amazinyo entwasahlobo ahlanganiswayo afakwa phakathi kohlaka nensimbi yokukhipha uketshezi ukuqedela umsebenzi wokususa ukhula nokuhlwanyela ngokuya ngezidingo zokusebenza.
Umlimi wamazinyo entwasahlobo ulungele kakhulu ogandaganda abanamandla angu-18-80 wamahhashi. Isakhiwo sonke somshini sakhiwa kakhulu ukumiswa, idivaysi yohlobo lwekama lokuqothula nohlaka. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ze-agronomic nezobuchwepheshe zezitshalo ezahlukahlukene zomileyo.
Langaphambilini Ukulima Inplenment-Ridger
Olandelayo: Amatebhe Umanyolo Truck